China Handheld Portable Mesh Nebulizer JZ492E orinasa sy mpanamboatra | Binic
Ny teknolojia vaovao an'ny Handul Portable Mesh Nebulizer dia mahatonga ny atomis ho mora kokoa.
Raha ampitahaina amin'ireo nebulizer misy hopitaly be sy be tabataba, ireo nebulizer vaovao tanana dia azo ekena kokoa ho an'ny mpanjifa noho ny endrik'izy ireo, ny fandidiana tsotra ary ny fizotran'ny fampiasana azy.
Ny fantsom-panafody medaly 2.5 microns dia mahatonga ny fidorohana zava-mahadomelina ho feno kokoa.Handheld Portable Mesh Nebulizer JZ492E mampiasa harato avo lenta, ao amin'ny faritra 2.5 mm, lavaka zavona maherin'ny 2.000 izay tsy hitan'ny maso mitanjaka no voasokitra amin'ny laser. Amin'ny alàlan'ny fihoaram-pahefana haingam-pandeha, ny fanafody ranoka dia voasivana ho fantsona micron tena tsara, izay mampiroborobo ny fifohana haingana.
DC2.4V (Lithium Battery) na DCS.0V miaraka amin'ny adaptatera AC
0,1 5ml / min-0,90ml / min
MMAD <5 hariva
130kHz, ny lesoka dia + 10%
Fahaizana amboaran'ny medikaly
Temperature: 5 ° C-40 * C Humidity: 80% RH
Tsindry Atmosfera tsy miankina amin'ny fanjakana: (70.0-106.0) kPa
Fitehirizana / fanaterana
Temperature: -20 ° C -50 ° C Humidity: 80% RH
Tsindry Atmosfera tsy miankina amin'ny fanjakana: (50.0-106.0) kPa
Sarontava zaza x 1
Sarontava ho an'ny olon-dehibe x 1
Vava vava x 1
Boky torolàlana x 1
Ny moisturizer azo entina dia mandray ny haitao farany indrindra sy ny haitao ultrasonic ho an'ny zavona lehibe sy poti-javatra kely latsaky ny 5 micrometro mba hisitrohana tsara kokoa.
Milamina sy tsy mitabataba
Ny tabataba dia latsaky ny 25dB mandritra ny fiasana, tsy hanaitra ny zanakao izany rehefa matory tsara izy ireo.
Fomba famatsiana herinaratra 2, mety amin'ny dia an-trano, mampiasa bateria 2 AA na mampiasa tariby USB.
Karazana tambajotran-tanana, maivana sy maivana, mora entina rehefa mivoaka, mora ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
Mamorona zavona manify izy, manodidina ny 2-3micrometer ny sombintsombiny kely.
Teknolojia avo lenta an'ny Ultrasonic
Ny zavona mangatsiatsiaka lehibe, novokarina avy hatrany tamin'ny fampiasana ny fihoaram-pefy ultrasonic, dia azo tsofokaina mora foana ao anaty alveolus sy hazo bronchial. Haben'ny sombiny: 1-5um. Ny fisondrotan'ny zava-mahadomelina sy ny siran'ny atomika masira dia kely <5um. Zana-tsavony 2 namboarina tamin'ny bokotra iray, tsindrio indroa miaraka amin'ny zavona kely kokoa izay mety kokoa ho an'ny zazakely.
1. Esory ny fonosana rehetra, avy eo esory ny singa sy ny kojakoja rehetra.
2. Apetraho amin'ny vatan'ny vatan'ny tavoahangy voaangona. Rehefa apetrakao io dia tokony hohenoinao ny feon-tsefatsefaka (toa ny aseho amin'ny sary an-tsary ny fametrahana ny tavoahangy misy rano).
3. Ampidiro ny saron-tava hisintona sy ny nozotra aseho amin'ny skatika.
Teo aloha: Fanaraha-maso ny foetus
Manaraka: Famantarana lehibe momba ny fahitalavitra maro karazana Monitor BNC1
Thermometer mialoha mialoha tsy misy fampiasa multifunctional